ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပပျောက်ရေး ဥပဒေကို ဒီကနေ့ မဲခွဲ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေသစ် ပြဌာန်းပြီးတဲ့အခါ ဘယ်သူတွေကို အရေးယူသွားမှာတဲ့လဲ။” (အသံ)
အစိုးရ၀န်ထမ်း ၁၇,၀၀၀ ကို ထောင်ဒဏ်အပါအ၀င် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေအလိုက် အရေးယူခဲ့ပါတယ်လို့ အစိုးရက တုန့်ပြန်ရှင်းလင်းပြီး မကြာခင်မှာပဲ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ပပျောက်ရေး ဥပဒေကို ဒီကနေ့ မဲခွဲ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေသစ် ပြဌာန်းပြီးတဲ့အခါ ဘယ်သူတွေကို အရေးယူသွားမှာတဲ့လဲ။ အသေးစိတ်ကို မဲခွဲအတည်မပြုမီမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ပုလဲလွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကို ဒေါ်ရီရီအောင်က မေးကြည့်ထားပါတယ်။
လာဘ် လာဘ်ယူကိစ္စ အရေးယူဘို့ဥပဒေ ပြဌာန်းတာကို ကန့် ကွက်သူရှိလို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရတာလား-ဘာဖြစ်လို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရတာလဲဗျ-
လဝက ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ကထွက်တော့မယ်
ဦးခင်ရီ သမီးကို ရည်းစားစကားပြောချင်တယ်
ကူညီနှိုင်တဲ့လူကို dollor $200ပေးမယ် ဘယ်လိုလဲ
nay naing said...
ဦးခင်ရီ သမီး ရည်းစကားပြောဘို့ ကူညီသူ ဒေါ်လာ-၂၀၀-နည်းတာပေါ့-ဦးခင်ရီ့ သမက်ဖြစ်ရင် သူခိုး-၀ှက်ထားတာတွေ နဲတာမဟုတ်ဘူး-အများကြီးဘဲ-ကိုယ့်ဘာသာပြောမှာပေါ့-ဘာလို့ခင်ဗျားအတွက် ကူညီနေမလဲ-ဟုတ်ဘူးလားဂျာ-
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဆင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်များ ပိုင်ဆိုင်မှု
DG DDG နဲ့ ညွှန်မှုးအဆင့်ထိ ပိုင်ဆိုင်မှု စာရင်းပြုစုသင့်ပါတယ်
နောက်တဆင့် မတရား ရယူထားပါက ထောင်ချပါ။
ဗမာပြည်ထုံးစံ အတိုင်းကောက်ရိုးမီးပုံစံမဖြစ်ဖို့ လိုတယ်
အစကတော့ တကယ်တိတိကျကျလုပ်တော့မလိုနဲ့ အဖျားရှုးတာများနေပြီ။
ဥပဒေ တစ်ခုဆိုတာ ပြီးပြီးရော လုပ်လို့မရဘူးလေ... မဲခွဲတယ်ဆိုတာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူကိစ္စ ကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူး...ဥပဒေ တစ်ခုကို အတည်ပြုဖို့ သက်သက်ဘဲ... ဘာဖြစ်လို့များ ငါတို့နိုင်ငံက လူတွေ အမြင်ကျဉ်းနေကြလည်း မသိတော့ကါဘူး.... ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ ခေတ်မဟုတ် တော့ဘူး... ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားပြီးမှ ဝေဖန်တာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်.... လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ တော်တဲ့ တက်တဲ့သူ တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်... အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြီးပြောတာတော့ မကောင်းပါဘူး.... ဆိုးတဲသူကလေးကိုတောင်မှ ဆိုးပါတယ်ဆိုးပါတယ်လို့ ပြောနေရင် အဲ့ဒိကလေး က ဘယ်တော့မှ ကောင်းလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး... မှားနေတာလေးတွေကိုဘဲ ၀ိုင်းပြင်ပေးရမှာပေါ့...
2004 ခုနှစ်ထဲမှာ ကျနော်တာချီလိတ်မှာ
အလုပ် လုပ်နေယင်း တ၇က်မှာ ကျနော်မှတ်ပုံတင်
ပျောက်သွားပါလေေ၇ာ ကျနော်လဲ မှတ်ပုံတင်
စားပွဲထိုင်ပြီးအလုပ် လုပ်နေတဲ့ 
အသားမဲမဲ ဗိုက်ရွှဲရွှဲ ငနဲက ၇ဲစခန်းထောက်ခံစာ
အယင်ယူခဲ့ ပါတဲ့တခွန်းပဲပြောတည်
ကျနော်လဲ ရဲစခန်းသွားပြီး မှတ်ပုံတင်ပျောက်ကြောင်း
အဲဒီ ရဲစာရေးငနဲကလဲ ဒါဆို ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
အယင်ယူခဲ့ ရမယ်တဲ့ 
ဒါနဲ့ကျနော်လဲ ၀မ်ကောင်း၇ပ်ကွက်ရုံးကိုသွားပြီး
လိုခြင်ယင် ရဲစခန်း ထောက်ခံစာဖြစ်ဖြစ်
လ၀ကထောက်ခံစာဖြစ်ဖြစ် အယင်ယူခဲ့ ရမတဲ့ ခင်ဗျာ
ရဲ စစ်သား လ၀က. နောက်ဆုံးမီးသတ်ဗျာ
အစိုးရလက်အောက်ခံ အဖွဲ့ စည်းအတော်များများဟာ
မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျား တိုင်းပြည်ပျက်သွားပါဦးမယ် . စဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ကြပါဦး . လာဘ်မစားတဲ့လူမရှိလို့ပါ.